ब्राउन सुगर सहित बाजुराकी एक युवती काठमाण्डौमा पक्राउ - नागरिक रैबार
बिहिबार, माघ १५, २०७७
ब्राउन सुगर सहित बाजुराकी एक युवती काठमाण्डौमा पक्राउ
सोमवार, मंसिर १५, २०७७
काठमाण्डौ १५ मंसिर । ब्राउन सुगर सहित बाजुराकी एक युवती काठमाण्डौमा पक्राउ परेकि छन् । पक्राउ पर्नेमा बाजुरा जिल्ला गाैमुल गाउँपालिका घर भएकी विनिस्ता धामी र एक बालक रहेको काठमाण्डाै प्रहरीले बताएको छ ।
युवति धामी सहित नाबालकलाइ सोमबार लागु औषध ओसार पसार गरिरहेको अवस्थामा काठमाण्डाै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । काठमाण्डौ प्रहरीका अनुसार युवति धामीसंग एक सय दशमलव १ ग्राम हिरोइन सहित रगेँहात पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेकी धामीलाई लागु औषध ओसार पसार ऐन अनुसार जरिवाना र कैद गरिने प्रहरीले जनाएको छ । उनको मुद्धा भक्तपुर अदालत सम्म पुगीसकेको प्रहरीको भनाई रहेको छ ।
अहिल्यै पिउनुस् ‘एक गिलास’ पानी !
ग्रामिण सुधार केन्द्र बाजुराद्धारा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
भीम रावललाई किन घेर्न चाहन्छन् ओली ?
नेकपा बडीमालिका नगरको सचिवालय बैठक बस्यो,अध्यक्षलाई कारवाही गर्ने
मार्तडीमा प्रचण्ड-माधव पक्षधरको प्रर्दशन (तस्वीरसहित)
युवा संघ बाजुराको एकता भेला तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रम सकियो
मार्तडीमा मोटरसाईकलले ठक्कर दिदा एक महिला घाईते
नेकपा बडीमालिका नगर कमिटीमा ५४ जना प्रचण्ड-माधव पक्षमा देखिए
बडीमालिका नगरपालिकाको खणेनी जंगलमा आगलागी
नागरिक रैबार/बाजुरा १५ माघ। बडीमालिका नगरपालिका ३ मा रहेको खणेनी जंगलमा आगलागी भएको छ । पिप्से र रजाली गाउँको विचमा रहेको खणेनी जंगलमा विहिबार विहान ११ बजेतिर आगालागी भएको हो । एक्कासी जँगलमा आगलागी भएपछि जंगलमा रहेका बोट, विरुवा, घाँस दाउरा जलेर नष्ट भएका छन् । सदरमुकाम मार्तडी नजिकैको जंगलमा आगो कसले लगाएको हो भन्ने […]
स्वस्थानी व्रत शुरु, शालीनदीका व्रतालुलाई पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य
१५ माघ, काठमाडौं । हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको श्रीस्वस्थानी व्रत कथा तथा माधवनारायणको पूजा आजबाट सुरु भएको छ । पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात गोडाका नङ काटी, स्नान गरी, शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यसको शुरुआत हुन्छ । बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गरिन्छ । बेलुकी स्कन्द पुराणको […]
खप्तड घुम्न हेली टुर प्याकेज
१५ माघ, डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थल खप्तड घुम्नका लागि पाँचदिने ‘हेली टुर’ प्याकेज सुरु भएको छ । खप्तडको प्रवेशद्वार झिंग्रानामा रहेको ‘खप्तड होमस्टे’ले आयोजना गरेको उक्त ‘हेली टुर’ प्याकेजको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुभारम्भ गरेका छन् । खप्तडको प्रमुख प्रवेशद्वार झिंग्रानाबाट हेली टुर प्याकेजको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले […]
मुलुक फेरि अँध्यारोतर्फ उन्मुख
पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएर संविधानसभाको कार्यकाल थप्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने त होइन भन्ने चर्चा चलेको थियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि परिवर्तन कसरी संस्थागत होला भनेर धेरैले चिन्ता गरेका थिए । संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दल संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिमा पुग्न नसकेर दसतिर फर्किंदा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले भन्थे, ‘दलहरू एक […]
प्रहरीलाई भाग लागेन कोरोना खोप
जोखिम मोलेर कोरोना महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरीलाई कोरोना खोप वितरणमा सरकारले विभेद गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी जत्तिकै फ्रन्टलाइनमै खटिने भए पनि प्रहरीलाई कसरी र कहिले खोप लगाउने भन्ने विषयमा सरकारले सूचीसमेत तयार पारेको छैन । सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड खोप लगाउने भन्दै बुधबारदेखि खोप अभियान सुरु गरेको छ । परिचालनको हिसाबमा अग्रपंक्तिमा रहने प्रहरीलाई […]
कक्षा १२ को परीक्षा : परीक्षा ३० पूर्णाङ्कको, नम्बर दिइयो ६० !
शिक्षकले जथाभावी प्राप्तांक पठाउँदा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको छ । कार्यविधिमा तोकिएको सिस्टममा परीक्षा केन्द्रहरुबाट नम्बर नआउँदा लक्ष्यअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । गत मंसिर १६ गते कक्षा १२ को संक्षिप्त परीक्षा सकिएको थियो । ‘परीक्षा सकिएको महिना दिनमा नतिजा प्रकाशन गर्न सक्छौँ जस्तो लागेको थियो,’ बोर्डका […]
‘सर्वोच्चको फैसला नआई निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्न पाइन्न’
ओली र प्रचण्डलाई ‘मिलाउने’ तागत आफूसँग रहेको गौतमको दाबी
ओलीले बालुवाटारबाट भर्चुअल विधिबाट खोपको शुभारम्भ गर्ने
ओलीले पार्टीको विधान विपरित काम गरेपछि पार्टीबाट हटायौंः नेता रावल
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा नागरिकता लिनेको भीड
वडा अध्यक्ष नै दिलाउँछन् विदेशीलाई नक्कली नागरिकता
दसैं भत्ता : सरकार र सभामुख चुक्दा सांसदको बदनाम
दुई वर्ष पछिको अप्रेसन मिति पर्खिंदै
बडीमालिका-९ , मार्तडी , बाजुरा
कम्पनि दर्ता नम्बर: २४१७६९/०७७/०७८
प्रतिलिपि अधिकार © २०१९/२०७५ लाटा घटाल मल्टिमिडिया हाउस प्रा.लि.द्धारा संचालित । सर्वाधिकार सुरक्षित।